शाबरीमाला मन्दिर, यौनिकता र छाउपडी :: Setopati
शाबरीमाला मन्दिर, यौनिकता र छाउपडी
भारतको केरलामा शाबरीमाला, कामख्या र छाउपडीबीच सबै महिला शरीर, उनको यौनिकता र महिनावारीसँग जोडिएका कुराहरू समान छन्।
पहिलो केही महिनासम्म महिनावारी भएको कुरा नभन्दा पाप लाग्ने हो कि?, भनेर मलाई डर त लागेको थियो। तर केही पनि नराम्रो नभएपछि ममाथि डर र अपराध दुवै बोध भएन। विज्ञान पढेपछि त झन् महिनावारी पाप होइन र बार्नु पनि पर्दैन भन्ने बोध हुँदै गयो।
मेरो बाजे सुदूर पश्चिमबाट आएको हुनाले म आफूलाई त्यहीँकी चेली भन्ने ठान्छु । २८ वर्षअघि डोटी, अछाम गएको बेला र त्यहाँ छाउपडी गोठ र त्योसँग गाँसिएको खराब संस्कृतिका बारे थाहा पाएपछि ‘ढकोसला प्रवृत्ति’ प्रतिकारको बारेमा केही पत्रिकामा लेख लेखेँ। ‘हाम्रो सुदूर पश्चिमको बेइज्जत गर्ने’ भनेर केही पत्रकारले मलाई झपारे पनि। तर मैले वास्ता नगरेर त्यो विषयमा लेखिरहेँ। अहिले ‘छाउपडी’ कुसंस्कार हो भन्ने विचार प्रायः सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई स्वीकार भइसकेको छ। तर अझै पनि बुढापाकाको मनबाट ‘छाउपडी ठिकै हो’ भन्ने हटाउन निकै गाह्रो छ।
अझ केही महिला अधिकारकर्मीले पनि ‘महिनावारी रगत दूषित नै हो, यो बेलामा नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुन्छ,’ भन्ने जस्ता गलत धारणाले गर्दा हाम्रो पढाई र विचार अझै १८ औं शताब्दीकै रहेको भान हुन्छ।
भारतको केरलास्थित शाबरीमाला मन्दिर।
केरलामा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले भोट पाउनका लागि महिलाको यौनिकतालाई आफ्नो ‘दल’ को लागि हतियार बनाए। ‘मानिसको विश्वासलाई अदालतको आदेशले खतम गर्न सक्दैन,’ भन्ने उनीहरूको विचार छ। के अदालत मूर्ख थियो त?
यस्तै हो भने यी व्यक्तिहरूले ‘सतिप्रथा फेरि आउनुपर्छ, किनकि, एकल महिला देखेर पुरूषको मनमा अनेक खुलदुली हुन्छ। उनी मरेकै बेश,’ भन्न बेर लगाउँदैनन्।
‘ब्रिटीश राज्यमा कानुनको गलत प्रयोग गरेर सतीप्रथा खतम गरेको बेठिक थियो’ भन्नसमेत सक्छन्।
महिलाको ‘महिनावारी’ पनि अहिले नेपालमा एक मुद्दा भएको छ। ‘छाउपडी’ ‘छाउगोठ’ भत्काउने काम अर्को राजनीतिक मुद्दा भएको छ। माओवादीले भत्काएका ‘छाउगोठको असफलताको’ कुरा पनि आइराखेको छ। त्यही माओवादी सत्तामा हुँदा उनीहरूले नै छाउँगोठ भत्काएका थिए।
‘छाउपडी पहिले ठिकै त थियो नि, गरिबहरूको घरमा भिन्दै कोठा थिएन। त्यसैले महिलालाई चार दिनसम्म आराम गर्न छाउगोठमा पठाएको’ भन्ने पनि अझै पाइन्छन्।
महिलालाई छाउगोठमा पठाएर, गाई/भैसीलाई १० भारी घाँस लिन पठाउँदा कसरी आराम हुन्छ? सर्पले टोकेर, आगोले पोलेर, कसरी महिलाको सुरक्षा हुन्छ भन्ने प्रश्नको छलफल कहिलै हुन्न।
छाउपडी गोठमा बसेकी महिलालाई बलात्कृत गर्ने पुरूषले चाहिँ महिलालाई छुन हुँदैन भन्ने विचार गर्दैन। तर महिनावारी हुँदा उनी ‘अपवित्र’ हुन्छिन् भन्ने डरले काठमाडौंमा पनि भिन्दै कोठामा राख्छन्। यद्यपी सुदूर पश्चिमका छाउगोठमा, महिनावारी हुनु अपवित्र हो भन्ने विचार चाहिँ दुवै ठाउँमा छ।
कामख्या देवी मन्दिर भित्र रहेको मूर्ति।
नेपालमा अहिले ‘स्यानीटरी प्याड’ स्कुलमा बाँड्न लगाएर सरकारले सिद्ध गरिसकेको छ कि, नेपाल सरकारको नियमले महिनावारीलाई ‘पाप’ मान्दैन।
अहिलेको युवा पुस्तामा पनि ‘महिनावारी’ सँग जोडिएको अधिकांश भ्रम हराएको छ।
तर अझै पनि महिलाको शरीरबाट जन्मिने पूजारी पनि महिलाको शरीर ‘अपवित्र’ को गीत गाउँछन्। उनीहरू हजारौं वर्ष अघिको संस्कृति सुन्दर थियो भनेर भन्छन्। तर हजारौं वर्षमा समाज कति परिवर्तन भइसक्यो भन्ने आत्मसात गर्न चाहन्नन्।
धार्मिक गुरूहरू अहिले मोबाइल र फेसबुक प्रयोग गर्छन्, उनीहरू ‘पुरानो जमानामा मोबाइल थिएन। त्यसैले हामी प्रयोग नगनरौं’ भन्दैनन्।
धार्मिक गुरूहरू आफ्ना लागि सहज हुने सबै नयाँ आविष्कारको प्रयोग गर्छन्, तर जब महिलाको स्वास्थ्य, उनको यौनिकता, प्रजनन र संस्कृतिको कुरा आउँछ, उनीहरू चाहन्छन् कि समाज कहिलै नबदलियोस्। २००० वर्ष अघिकै भइरहोस्।
महिला शरीर र महिनावारी प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। तर सुदूर पश्चिम र काठमाडौंले यसलाई फोहोरसँग जोडेको छ। किन हो बुझिनसक्नु छ। यदि महिनावारी पाप हो र फोहोर हो भने हामी सबै फोहोरी र पापी भएनौं त?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७, १२:४२:००